1 USD သို့ DKK ᐈ ပွောငျး $1 အမေရိကန် ဒေါ်လာ တွင် ဒိန်းမတ် ခရိုဏာ
1 USD သို့ DKK
သငျသညျပြောင်းလဲပါပြီ 1 🇺🇸 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ 🇩🇰 ဒိန်းမတ် ခရိုဏာ. သငျသညျအရှိဆုံးတိကျမှုရလဒ်ပြသနိုင်ဖို့ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုအသုံးပြုပါ. ငွေကြေးပြောင်း 1 USD သို့ DKK. ဘယ်လောက်လဲ $1 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာ? — kr.6.206 DKK.ယင်းကိုကြည့်ပါ ပြောင်းပြန်သင်တန်း DKK သို့ USD.ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်၌စိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည် USD DKK သမိုင်းဆိုင်ရာဇယား, နှင့် USD DKK သမိုင်းဆိုင်ရာမှာ data ငွေလဲနှုန်းကို၏. ကြိုးစားကြဖို့အခမဲ့ခံစားရ ပိုပြီးပြောင်း...
ပွောငျး 1 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာ
မှုနှုန်းခြင်းအားဖြင့်: kr.6.206 DKK (-0.000180)-0.00290%
ပြောင်းပြန်: $0.161 USD
မင်းသိလား? တစ်ဦးကလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်, ထိုနေ့၌, ငွေကြေးနှုန်းကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ရန် ဒိန်းမတ် ခရိုဏာ ခဲ့: kr.6.861. ထိုအချိန်မှစ. ငွေလဲနှုန်းရှိပါတယ် အားဖြင့်ယုတ်လျော့ -0.655 DKK (-9.55%).
50 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာ100 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာ150 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာ200 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာ250 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာ500 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာ1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာ2000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာ4000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာ8000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာ1 Aigang သို့ Dogecoin2000000 အီရတ် ဒီနား သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ1000 Transfer သို့ ထရီနီဒတ်နှင့် တိုဘက်ဂို ဒေါ်လာ25.176 Bee Token သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ100 Core Group Asset သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ1 Authorship သို့ Dogecoin300 Bee Token သို့ တူနီးရှား ဒီနာ200000 တောင်ကိုရီးယား ဝမ် သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ225 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ1800 စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ သို့ မလေးရှား ရင်းဂစ်1 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ အီရန်ရီအော်လ်0.007 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ အီရန်ရီအော်လ်5000 တာ့ခ်မင်နစ္စတန် မာနတ် သို့ အီရန်ရီအော်လ်1 တာ့ခ်မင်နစ္စတန် မာနတ် သို့ အီရန်ရီအော်လ်